I-KDE ilungiselela ukuphakama kobuso bokubukela umfanekiso weGwenview | Ubunlog
IPablinux | 19/06/2021 14:04 | KDE, Ubuntu
IPlasma 5.22 Kwakunjalo, ngokukaNate Graham, inguqulelo eyafika ngaphandle kweziphene ezininzi kwaye ngaphezulu kwako konke ukuphucula esele ikhona. Kwiveki ephelileyo, inqaku elininzi leveki yintoni entsha kwi KDE Eziza kufika kwikamva elifutshane zibhalwe ukuba yiPlasma 5.22.1, kwaye kule veki bathethile nathi Kwezinye uninzi lweebugs ezazilungiswe kuloo nguqulo, kodwa zikhankanyiwe namhlanje. Ewe kunjalo, kuyinyani ukuba iPlasma 5.22 iqhuba kakuhle, kodwa i-KDE inayo oku: iqhubela phambili kakhulu kwaye ngokukhawuleza kangangokuba kuhlala kukho izinto zokupholisha.
Kwiibugs abazikhankanyileyo abazilungisa kwiPlasma 5.22.1, uninzi zihambelana nohlelo Inkqubo yokuHlola, kwaye kusengqiqweni ukuba bayikhathalele kuba ukusukela kuguqulelo lokugqibela lwe desktop sisicelo esisemthethweni se KDE ukubona okwenzekayo, endaweni ye rocker endala KSysGuard. Kwezinye iindaba, ezinye ziza kufika ngokukhawuleza ngoLwesibini, kwaye uninzi lwazo lujolise ekuphuculeni iGwenview, kodwa sele ikho ngo-Agasti.
1 Amanqaku amatsha azakuza kungekudala kwi KDE Desktop
Amanqaku amatsha azakuza kungekudala kwi KDE Desktop
Iingcebiso ezandisiweyo, eziza kuthatha indawo endala "Yintoni le?" Ngoku, ukuba sicinezela iShift kuninzi lweeapps ezisebenzisa isakhelo seKirigami kunye ne-KXMLGui, ulwazi olongezelelweyo luya kuvela (iiNkqubo-sikhokelo 5.84).
Ngoku ungabamba iqhosha le-Alt lokurhuqa iifayile ezikrwelelwe ukusuka eKonsole ukuya kwezinye izicelo ngeenjongo ezahlukeneyo (Tomaz Canabrava, Konsole 21.08).
Impembelelo yencoko yababini enciphisa iifestile emva kwencoko yababini ayisasebenzi xa incoko yababini ivaliwe (iVlad Vahorodnii, iPlasma 5.22.2).
Fumanisa ukuba awusoloko ulumkisa ngokuhlaziywa nokuba akukho (Aleix Pol González, IPlasma 5.22.2).
Xa iPlasma iqalwa kwakhona, nokuba kungokuzenzekelayo okanye ngokuzenzekelayo kuba iyaphazamiseka, iindlela ezimfutshane ezinxulumene nePlasma, ezinje ngeMeta + inombolo yezitshixo yokwenza izinto zomphathi womsebenzi, zingasasebenzi (uDavid Edmundson, iPlasma 5.22.2).
Kwiiseshoni zePlasma Wayland, isikhombisi asisabonakali ngokufutshane emva kokuba isikrini sivukile (Xaver Hugl, iPlasma 5.22.2).
Ileyibhile ethile kwiphepha elikhethiweyo kwiiNkqubo zeDesktophu eziSebenzayo azisagqithi ngendlela engafanelekanga xa kusekho indawo eninzi (uNate Graham, iPlasma 5.22.2).
Kwiphepha lescreen sokukhetha uKhetho lweNkqubo, amaphepha abonakala ngokungqamanisa useto kunye nokutshintsha iphepha lodonga ngoku ayanyamalala emva kokusetyenziswa, ukubonelela ngesiqinisekiso sokuba isenzo esenziwe siphumelele (Nate Graham, Plasma 5.23).
Izithunzi zesixhobo seTlasma kuyo yonke iPlasma azisekho kwimbonakalo eyaphukileyo kwiikona zazo (Marco Martin, Frameworks 5.84).
Ukujonga okucocekileyo, ibar esecaleni yeGwenview ngoku ifihliwe ngokungagqibekanga, kwaye ukubonakala kwayo ngoku siseto sehlabathi endaweni yendlela emiselweyo (Felix Ernst, Gwenview. 21.08).
Umboniso weelebheli zikaGwenview kwibar esecaleni (xa ibonakala) ngoku intle kakhulu (UNowa Davis, uGwenview 21.08).
UGwenview akasasisebenzisi isithuba kunye namaqhosha okubuyela umva ekuhambeni ngokungagqibekanga, ukuthintela isitshixo sendawo ekuphikisaneni nokudlala / ukumisa ikhefu xa usiya kwividiyo. Ukuhamba phakathi kwezinto, sebenzisa izitshixo zetolo (uNate Graham, uGwenview 21.08).
Inqaku likaKonsole lokwahlulahlula izinto ngoku liza kwahlulahlulahlulahlulahlula abanye xa ubarhuqa (uTomaz Canabrava, Konsole 21.08).
Ukufumanisa akusasibonisi isaziso sokuba uhlaziyo olungaxhunyiwe kwi-intanethi lube yimpumelelo, kuba ukuba uyakwazi ukuyibona kucacile ukuba inayo (uNate Graham, iPlasma 5.22).
Umxholo we-Breeze SDDM ngoku ubonakalisa ujongano lomsebenzisi olufanelekileyo ngakumbi kwiiakhawunti ngaphandle kwephasiwedi kodwa ngokungena ngokuzenzekelayo kukhubazekile (Tadej Pecar, Plasma 5.23).
Ibhodi eqhotyoshwayo ngoku ikhumbula izinto ezingama-20 ngokungagqibekanga, xa kuthelekiswa ne-7 (Felipe Kinoshita, IPlasma 5.23).
Izinto zeGridi kukhetho lweNkqubo kunye neePokota zePhepha lodonga azisakhanyisi indawo yomxholo xa uzulazula phezu kwazo, ke ihlala inikezelwa ngokuchanekileyo (uNate Graham, iiNkqubo-sikhokelo 5.84).
IPlasma 5.22.2 iyeza ngoJuni 15 kwaye i-KDE Gear 21.08 izakufika ngo-Agasti, kodwa asazi ukuba loluphi usuku kanye, andazi ukuba ndilindele ntoni. Isakhelo esingu-10 siza kufika nge-5.84 kaJulayi, kwaye sele kulapho emva kwehlobo, iPlasma 5.23 iya kuhlala nomxholo omtsha, phakathi kwezinye izinto, ngo-Okthobha u-12.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » KDE » I-KDE ilungiselela ukuphakanyiswa kobuso kweGwenview kunye nokulungiswa kwePlasma 5.22
Iphedi yokuchukumisa, yikhubaze ngelixa uchwetheza okanye xa imouse ixhunyiwe